Malunga nathi - Bruicojewelry Accessories Co., Ltd
Bruico Jewelry ubonelela ngeenkonzo zobungcali izacholo ulwenziwo, uyilo, nemveliso nokuqhutywa, ubukhulu becala ugxininisa 14K no 18K ishishini emihle. Bruico Jewelry yasekwa ngo-2015 kwaye ithatha indawo 500 yesikwere seemitha, eye-mveliso yayo, oomatshini bokushicilela, oomatshini ipolishi, oomatshini CNC kunye noomatshini zombane.
Sinikeza ngeenkonzo zobungcali kuyilo izacholo kunye nemveliso. Siye senza enkulu yaye yaseka iqela leengcali malunga nasekuthengeni, intengiso, admin, ezemali kunye nokuthengisa. Okwangoku inkampani yethu abasebenzi 50, abayili-3 kunye namagcisa zokuzoba 2. Iqela lethu beselula kwaye sinamandla, ngoomoya zemisebenzi enisinike kunye kengoku fashion ngokugqibeleleyo. Sinako ukuphendula ngokwemfuneko yoMthengi kwisithuba seeyure ezingama-48.
Thina amava atyebileyo kuyilo izacholo kunye nemveliso. kwizinga eliphezulu liqinisekile nothenjiweyo. iimveliso zethu uluhlu olubanzi kusetyenziso, ezifana mbhiyozo phakathi intimates, babekho zonyuselo, izipho imisitho emikhulu. Imiyalelo ikakhulu kwiivenkile izacholo niche, abayili abazisebenzelayo kunye boutiques.